SystemRescueCd 1.5.2 nivoaka, distro hanamboarana ny rafitrao | Avy amin'ny Linux
Nivoaka ny SystemRescueCd 1.5.2, distro hanamboarana ny rafitrao
SystemRescueCd Izany dia Linux distro amin'ny LiveCD hanamboarana ny rafitrao ary hamerina ny angon-drakitrao aorian'ny loza. Miezaka ihany koa izy manome fomba mora hanatanterahana asa fitantanana amin'ny solo-sainao, toy ny famoronana sy fanovana fizarana sns.
Tsy manana ny interface tsara indrindra eto an-tany izy io ary tsy natao hiasa ho toy ny rafitra miasa feno, fa miasa tanteraka amin'ny zavatra namoronana azy: mba hialanao amin'ny olana..
Ahitana izany fitaovan'ny rafitra iray taonina (misaraka, misaraka, fstools, ...) ary fototra (tonian-dahatsoratra, komandin'ny mamatonalina, fitaovan'ny tambajotra). Mora tokoa ny mitantana azy: manomboka amin'ny CD-ROM ianao, ary mamela anao hanao ny zava-drehetra. Ny rafitra kernel manohana ireo rafi-drakitra manan-danja indrindra (ext2 / ext3, reiserfs, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660), ary ireo tambajotra (Samba sy NFS). Miorina amin'ny Gentoo Live CD ny SystemRescueCd.
ny sasany toetra raisin'izy ireo:
Kernel 2.6.33.02 na 2.6.32.11
Nisaraka ny GNU ary GParted mba hampisaraka na hanova ny haben'ny kapila, anisan'izany ny FAT32 sy ny NTFS
Mpitantana fizarazarana ranish
Fikirakirana ny bokotra fizarazaran'ireo kapila
PartImage, rindrambaiko fanaovana klona kapila izay mandika ireo sehatrasa efa niasa ihany
TestDisk hamonjy fizarazarana very sy PhotoRec hamerina vaovao very
CD sy DVD mandoro
Mpijery Internet: Mozilla Firefox, Lynx, Links, Dillo
Rindrambaiko (un) manery rakitra.
Fitaovana rafitra: mamorona, mamafa, manisy habe ary mifindra rafitra fisie
Fanohanana ireo rafi-drakitra samihafa: fanohanana feno ny famakiana / fanoratana ho an'ny NTFS (amin'ny alàlan'ny NTFS-3G) ary koa FAT32 sy Mac OS HFS.
Fanohanana ny rafitra Intel x86 sy PowerPC, ao anatin'izany ny Mac.
Mety hamoronana kapila boot ho an'ny rafitra fiasa samihafa.
Tohano amin'ny fanovana ny rezistra Windows ary fanovana ny lakilen'ny fanombohana ny rafitra.
Azonao atao ny manomboka ny FreeDOS, ny fitiliana fitadidiana, ny diagnostika ary ireo kapila boot hafa avy amin'ny kapila tokana.
Tranonkala ofisialy: http://www.sysresccd.org/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Nivoaka ny SystemRescueCd 1.5.2, distro hanamboarana ny rafitrao
GStyle, mpitantana lohahevitra vaovao ho an'i Gnome
Audacious 2.3 dia mivoaka